The Expendables3(2014) | MM Movie Store
The Expendables3(2014) သညျ IMDb 6.1/10 Google users 87% ရထားသော ဒါရိုကျတာ Patrick Hughes ရိုကျကူးထား၍ Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger တို့က ဇာတျလမျး ဇာတျညှနျး ရေးသားကာ သရုပျဆောငျ Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Action, Adventure, Thriller ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ….
Barney သညျ သူရဲ့ သှေးသောကျအသဈနဲ့အတူ ပူးပေါငျး၍ Conrad Stonebanks နှိပျနှငျးရလသေညျ သူရဲ့ မရှိမဖွဈ တှဲဖကျတညျထောငျသူနဲ့ ဆိုးသှမျးတဲ့ လကျရုံးကုနျသှယျရေးသမားသညျ Barney နဲ့ သူနဲ့ပတျသကျသမြှကို ရှငျးထုတျနတေဲ့အခါ ဘယျလို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးကွမလဲ မငျးသားကွီးမြားရဲ့ အကျရှငျကောငျးကောငျးမြားကို တဈကားတညျးစုကွညျ့လိုကျကွဖို့ တငျလိုကျပါရစခေငျဗြ
The Expendables3(2014) သည် IMDb 6.1/10 Google users 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Patrick Hughes ရိုက်ကူးထား၍ Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….
Barney သည် သူရဲ့ သွေးသောက်အသစ်နဲ့အတူ ပူးပေါင်း၍ Conrad Stonebanks နှိပ်နှင်းရလေသည် သူရဲ့ မရှိမဖြစ် တွဲဖက်တည်ထောင်သူနဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ လက်ရုံးကုန်သွယ်ရေးသမားသည် Barney နဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်သမျှကို ရှင်းထုတ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲ မင်းသားကြီးများရဲ့ အက်ရှင်ကောင်းကောင်းများကို တစ်ကားတည်းစုကြည့်လိုက်ကြဖို့ တင်လိုက်ပါရစေခင်ဗျ